ဘာသာစကား Afrikaans አማርኛ العربية অসমীয়া Azərbaycanca Башҡортса Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Corsu Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Euskara فارسی Suomi Føroyskt Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego ગુજરાતી Harshen Hausa עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl Ayisyen Magyar Հայերեն Indonesia Asụsụ Igbo Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Қазақша ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한글 Kurdî Кыргызча Lëtzebuergesch ພາສາລາວ Lietuvių Latviešu Malagasy Māori Македонски മലയാളം Mongɣol kele मराठी Bahasa Melayu Malti မြန်မာစာ नेपाली Nederlands Norsk Chinyanja ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Polski پښتو Português Qhichwa Română Русский Ikinyarwanda سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Sāmoa chiShona Af-Soomaali Shqip Српски Sesotho Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ภาษาไทย Türkmençe Filipino Türkçe Татарча ئۇيغۇر Українська اردو Oʻzbekcha Tiếng Việt isiXhosa יידיש èdè Yorùbá 中文 isiZulu ကီးဘုတ်လက်ကွက် US English UK English US Dvorak Programmer Dvorak US Colemak US Workman Español Latino हिन्दी देवनागरी इन्स्क्रिप्ट العربية Português Brasileiro ABNT বাংলা Русский ਪੰਜਾਬੀ پنجابی Deutsch Deutsch Schweiz Jawa Indonesia Melayu తెలుగు Tiếng Việt Français Français du Canada Canadien Multilingue Français de Belgique Français de Suisse Français Bépo मराठी தமிழ் اُردُو‎ Türkçe Q Türkçe F Italiana แป้นพิมพ์เกษมณี ગુજરાતી فارسی Polski پښتو ಕನ್ನಡ മലയാളം Sunda ଓଡ଼ିଆ မြန်မာဘာသာ Українська Filipino Oʻzbekcha سنڌي Română Azərbaycanca Nederlands Belgische AZERTY Af-Soomaali Malagasy नेपाली සිංහල ភាសាខ្មែរ অসমীয়া Kiswahili Magyar Ελληνική Қазақша České Català Српски Srpski Svensk ພາສາລາວ Qhichwa Türkmençe Тоҷикӣ Български Български Фонетичен Shqip Afrikaans Հայերեն Татарча Монгол Hrvatski Dansk עברית Sesotho Slovenčina Suomi Norsk ქართული Кыргыз Беларуская Bosanski Lietuvių Galego Slovenščina Latviešu Македонски Башҡортса Eesti Euskara Cymraeg Malti 47 Malti 48 Frysk Lëtzebuergesch Icelandic Gaeilge Føroyskt Māori Keyboard ကို ▄▄ 104 ▄▄ 105 ▀█ ▄█
သင်ဆဲလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အတူစာရိုက်နေကြသနည်း သင်ဆဲတိုင်း keystroke မီသင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
Touch ကိုစာရိုက်လေ့လာမှုကိုသင်လေ့လာသင်ယူကူညီဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဟာအခမဲ့အသုံးပြုသူ-friendly သင်ယူမှုဝက်ဆိုက်ဖြစ်သည်လေ့အကျင့်နှင့်သင့်စာရိုက်အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
သင် type ကိုမထိနိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ရိုက်ထည့်ရန်နှင့်သင်တို့သည်လည်းပိုမြန်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့မှာရိုက်ထည့်မှနိုင်ပါလိမ့်မည်ချင်တဲ့စာလုံးကိုရှာကီးဘုတ်ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်လိမ့်မည်!
Touch ကိုစာရိုက်မယ့်အစားမျက်မှောက်ကြွက်သားမှတ်ဉာဏ်အပေါ် အခြေခံ. နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုသင်အခြားအမြင်အာရုံပစ္စည်းမှစာသား transcribe ရန်လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်, ဒေတာ entry ကိုအများကြီးပိုမြင့်မြန်နှုန်းအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ထိတွေ့စာရိုက်နည်းလမ်းနဲ့စာရိုက်သိသိသာသာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး, ကဒေတာ entry ကိုမြန်နှုန်းကိုတိုးပွားစေပြီးအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်, မျက်စိမှပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုလျော့နည်းစေသည်။
စာရိုက်လေ့လာမှု 15 သင်ခန်းစာတွေကိုသင် Step-by-step ကိုရိုက်ထည့်ပါသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပျော်စရာရှိသည်သင်ယူနိုင်ရာမှတစ်ဦးမြန်နှုန်း Test နှင့်ဂိမ်းများပါရှိသည်တို့ထိ!
မူပိုင်ခွင့် © 2009 - 2020, www.typingstudy.com